1. လက်ဆောင်အတွက် တခါတရံကျွန်ုပ်တို့သည်လျှို့ဝှက်စွာရှုပ်ထွေးစေသည့်ရှည်လျားသောဆလင်ဒါထဲတွင်လာသည် ဆလင်ဒါလက်ဆောင်ထုပ်ပိုးနည်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်းယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဆောင်ပေးသူမှပျော်ရွှင်မှုကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ပုံမှအဆင့်တိုင်းအတွက်လက်မှုပညာနှင့်ဂရုစိုက်မှုကိုခံယူခဲ့သည့်လက်ခံသူထံမှကျေနပ်မှုကိုဖြည့်စွက်ပါ၊ ဤအထူးပွဲတော်၌လက်ဆောင်ရသူတိုင်းကိုခြုံရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုကြည့်ရှုပါ ထို့အပြင်ပြီးဆုံးသောအခါသင်အလွန်ဂုဏ်ယူလိမ့်မည်။
2. ပစ္စည်းကိရိယာ ဆလင်ဒါလက်ဆောင်ထုပ်ပိုး
3. - လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးပြီး လက်ခံသူ၏ဇာတ်ကောင်နှင့်ကိုက်ညီရန်ရွေးချယ်ပါ။ သင့်လျော်သောအရောင်များနှင့်ပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်း ဒီခေတ်မှာသဘာဝဖိုင်ဘာစက္ကူကိုရှာချင်နေတယ်။ ဒါကနွေးထွေးပြီးအထူးခံစားချက်ပေးသည်၊ မထူးဆန်းပါ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကြီးမားသောဆလင်ဒါသေတ္တာတစ်ခုဖြစ်ပါကရွေးချယ်ထားသောစက္ကူသည်ကြီးမားရမည်။ လှပသောထုပ်ပိုးရန်အတွက်ရောစပ်ခြင်းမှစက္ကူကိုအတူတကွသုံးပါ။ - သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်လွယ်ကူသောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောပန်းတစ်ပွင့်နှင့်တွဲဖက်ထားသည့်လေးသို့မဟုတ်ဖဲကြိုးသည်အခြားတစ်ခုနှင့်ချစ်စရာကောင်းသည် - စက္ကူကိုဖြတ်ခြင်း၊ - ပွင့်လင်းသောတိပ်ကော်နှင့်နှစ်ဖက်တပ်ကော် - ဆလင်ဒါသေတ္တာ သင်လက်ဆောင်ကိုသင့်တော်သောအရွယ်အစားဖြင့်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ကြာကြာ ၎င်းသည်နေရာကိုအလှဆင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသောလက်ဆောင်သေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သည် ထိုအခါနေရာချအရွယ်အစားကိုရွေးပါနှင့်ထူးချွန်ကြည့်ရှုပါ
5. - ဆလင်ဒါအကွက်ပတ်ပတ်လည်ရှိစက္ကူများကိုတိုင်းတာရန်စတင်ပါ။ ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ရှည်လျားသောနှစ်ဖက်စလုံး - ထိပ်နှင့်အောက်ကိုညီမျှစွာခေါက် - စက္ကူ၏အဆုံးကိုပွင့်လင်းသောတိပ်ဖြင့်ဘေးဖက်ရှိသေတ္တာတွင်ကပ်ပါ။ မည်သည့်သဲလွန်စကိုမျှမမြင်နိုင်စေရန်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကော်ဖြင့်ကပ်ပါ - ထိပ်ဖရီသို့ရောက်ရှိပါ စာရွက်၏အဆုံးကိုဆွဲချပါ ပြီးတော့ပွင့်လင်းတဲ့တိပ်ခွေနဲ့ကပ်ထားတယ် - ညာဘက်ထောင့်မှာကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ထိပ်မှာရှိနေတဲ့အသားအရေကိုထိန်းထားရန်ပွင့်လင်းသောတိပ်ခွေကိုအခါအားလျော်စွာအသုံးပြုပါ စက်ဝိုင်း၏အဆုံးသည်အထိလိုက်ဖမ်းပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးလုပ်ပါ
6. - စက္ကူကိုစက်ဝိုင်းထဲဖြတ်ပြီးအပေါ်ဘက်တွင်ကပ်ပါ။
7. - ဖဲကြိုးကိုလှလှပပထိပ်တွင်ထားပါ။ ပြီးပြီ။ ပြီးဆုံးနှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏စစ်ဆေးပါ
8. ဒါဟာမခက်ခဲဘူး ဆလင်ဒါလက်ဆောင်တစ်ခုခြုံဘယ်လို ထို့အပြင်လက်ခံသူကိုနောက်ထပ်မျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်သည် သေတ္တာ၏ပုံသဏ္thisာန်သည်ဤကဲ့သို့သောပုံရသည်။ မင်းလက်ဆောင်ရလိမ့်မယ်ဘာလဲ ထိုအနှစ်ကုန်မှာ ဆလင်ဒါလက်ဆောင်သေတ္တာတစ်ခုကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ အိမ်အလှဆင်သို့မဟုတ်ခရစ္စမတ်ထောင့်အဖြစ် ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံ၏ရှုထောင့်ရှုထောင့်ရရန် အလှအပနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်လွယ်ကူပြီးမလွယ်ကူပါ။
9. ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ရလဒ်များသည်အမြဲတမ်းကောင်းပါသည်၊ သင်၏ကလေးများအားသင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်လက်ဆောင်ထုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၌အတူတကွပူးပေါင်းရန်ဖိတ်ပါ။ ကျွမ်းကျင်မှုအလှဆုံးထွက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း သို့သော်ချစ်ခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်း ဒါဟာမိသားစုထဲမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြိုးစားချင်သောနွေးထွေးမှုနောက်တစ်ခု !!